Kedu ka ndị uweojii na-eyi igwefoto si emetụta nzuzo na Asia - OMG Solutions
Nzuzo bu isi okwu a ghaghi ilebara anya tupu enwee ike inabata igwefoto ndi mere ahu aru n’ime usoro obula. Anyị niile na-asọpụrụ na anyị hụrụ nzuzo anyị n'anya, ọ nwere ike ịkpata ọgba aghara mgbe a chọpụta anyị na-elele na oge nzuzo anyị. Nke a bụ nnukwu nsogbu n'ọtụtụ mba gbalịala ịnwe sistemụ igwefoto ahụ na-eyi. Mana ọ bụrụhaala na-agwa ma dozie nsogbu nzuzo, ọ nweghị ezigbo ihe kpatara ịgaghị eji akụrụngwa igwe anaghị eyi. Dabere na posta china ndịda, ojiji a na-ejikarị igwe eji eme ihe maka ịdekọ vidiyo n’ebe ọha na eze eweliwo ụfọdụ nchegbu nzuzo. Nke a bụ ihe kwere nghọta, akụkụ kachasị njọ nke na-esikwu ike karị ịghọta eziokwu bụ na edere ihe ndekọ ndị a emere iji mee ihe maka mmebe iwu.
N'inyochala kamera ahụ ruo nwa oge, ndị uwe ojii na China dị ugbu a iji kwadebe ndị ọrụ nchekwa n'ihu ngwaọrụ ndị a na-edekọ. Edere ihe ndị a niile ka ha wee nwee afọ 4. Dịka atụmatụ maka mmemme ndị a na-agabiga ma jiri nwayọọ nwayọọ na-anọ, ọ dị oke mkpa na ndị uwe ojii na-agbatị mbọ ha gbasara ịgba mbọ hụ na ha lebara nchegbu ọha na eze nwere banyere ngwa ọrụ ndekọ a. Ndị uwe ojii kwenyere na igwefoto ahụ bụ ngwa ọrụ mmanye iwu dị mkpa. Ha kwenyere na ọ nyere aka dị ukwuu na-enyere aka ịchebe mmadụ niile na omume ha kacha mma. Enweela ọnọdụ ebe enwere esemokwu dị n'etiti ndị uwe ojii na ọha na eze site na nyocha nke ndekọ ndekọ sitere na igwefoto ahụ. Ndekọ ndị a abaarala uru dị ukwuu iji chee maka okwu ikpe, ha bụ ezigbo akaebe nke nwere ike ịgbanwe ọnọdụ ikpe ahụ n'ezie.
Enweela ikpe ndị metụtara mwakpo onye uwe ojii na-anwa ịrụ ọrụ ya, ndị nkịtị ga-ama ụma gbochie onye ọrụ iwu. N'ọnọdụ dị ka nke a, onye uwe ojii ga - eme ka ọ were ike dị mkpa iji mesoo onye ahụ mejọrọ ihe. Oge ụfọdụ, otu onye nkịtị a nwere ike bulite ebubo na ọ na-ebo onye uwe ojii ahụ ike, na-enwetụ ụdị oge a ọtụtụ oge. Ọtụtụ oge ọ nweghị ụzọ ọ bụla iji gosipụta onye nkịtị ka ịgha ụgha, maka nke a, a tara ọtụtụ ndị ọrụ mere ọrụ ha nke ọma ntaramahụhụ. N'iji igwefoto aru, ihe ndekọ nwere ike ịrụ ọrụ dị oke mkpa nke ga-ama ikpe.
Nlele na echiche
Ruo ugbu a anyị lere anya site n'aka onye ọrụ ndị uwe ojii, nke a abụghị nkọwa zuru oke gbasara okwu ikpe niile. Nke a nwere ike ịpụta na a ga-agọnarị ọhaneze ikike ime ngagharị iwe, nke pụtara na ha enweghị ike ịlụ ọgụ maka ihe ziri ezi, gbachitere onwe ha na ngagharị iwe udo mgbe azọpụrụ ikike ha. A na-egbochi ụfọdụ iso inwe nzukọ udo. Dika a na-eme ma na-eji ihe ndekọ a, ọ dịkwa mkpa iburu nchekwa na mmegharị ha.
Viewsfọdụ echiche ndị mmadụ na ihe ha tụrụ anya tupu eji igwefoto eme ihe bụ:
Ekwesịrị itinye ebe nchekwa dịka a ga-anabata ya
Ndekọ ga-abụrịrị ihe mere eme ga-akọrịrị ndị isi ha
Ọ bụrụ na ọ ga - ekwe omume, ndị uwe ojii kwesịrị ịgwa ndị nkịtị tupu ha edekọ ihe
Ndị otu ọkachamara ga - ejiderịrị ya ma kpochapụ ya mgbe ọnwa gachara ma ọ bụrụ na ọ baghị uru na nyocha ha
A ga-ederịrị ihe ndekọ ejiri maka ọzụzụ iji zere igosi onye ọ bụla amata
Ndi Hong Kong pan-onye kwuo uche ya na ebulite okwu nzuzo n’ihi ebum n’uche inye ndi oru nche n’aho 2021
Ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na Honk Kong welitere nchegbu banyere atụmatụ iwepụta onye ọrụ ọ bụla na frontline na igwefoto 2021, nkwupụta ntọhapụ na-ekwu na ha na-akwadebe maka iji meziwanye ụzọ ndị ọrụ nke isi na-edozi esemokwu na kwa ngagharị iwe ọha. Arụmụka kansụl na-ekwu maka okwu a, onye na-ahụ maka nchekwa John Lee Ka-Chiu, onye ekwuru na ọ bụ onye ga-eweghara dịka onye na-ahụ maka nchekwa na July. O kwuru na ike ahụ enweela ike ịnwale ọnwụnwa abụọ na igwefoto ahụ, ọ sịrị na ngwaọrụ ahụ etinyela aka na ndị isi kemgbe 2013. Maazị Lee kwuru na maka ọtụtụ ihe ndekọ, ojiji nke iji igwefoto ahụ nwee ihe ịga nke ọma nwee ike iwepụ ọnọdụ n'ọnọdụ ọzọ ma kwụsịkwa isiokwu ndị metụtara itinye ọnụ.
N'ọtụtụ oge metụtara mwakpo ndị uwe ojii na ịma ụma na-egbochi onye ọrụ ọrụ iji mezuo ọrụ ha, a na-ewepụtakarị ma gosipụta ya dị ka ihe akaebe ma gosipụta maka nkwenye. Nke a na-eme ka ọrụ ahụ dị mfe ma na-aga n'ihu. Akụkụ a nke igwefoto vidiyo na - eji ese foto enyerela aka n'ọtụtụ okwu ma dozie nsogbu ndị agaraghị enwe ike idozi na - enweghị vidiyo vidiyo ndị ahụ. Maazị Lee kwuru, "Ọ gaara esi ike ma ọ gaghị ekwe omume ịnwe mmegharị na ịmalite kpamkpam nke igwefoto ahụ," anyị ga-aga na-agbakwunye ya nke nta nke nta ma tinye ya na sistemụ anyị yana site na 2021, ihe niile anyị ga - enwe ndị uwe ojii na-ahụ ụzọ n'ihu ga-eji teknụzụ igwe na-eyi uwe.
Ike dị ebe ahụ nwere nkeji 1,390 nke igwefoto dị otú a maka ndị ọrụ na ngalaba mberede. Agbanyeghi ogige ulo oru na - akwado echiche a tụpụtara ma tụọ aro ka etinye ya ngwa ngwa, etu osiladị, ndị isi ochichi onye kwuo uche ya jụrụ ma a gaghi-etinye ihe nzuzo nke ụmụ amaala a, na mmejuputa a gbochiri ndị ọrụ iwe iwe iwe mgbe ha na - eme ya. mbipụta. Ndị a bụ ajụjụ dabara adaba ha tụpụrụ na-arịọ maka nzaghachi ozugbo. Maazị Nathan iwu (onye omebe iwu Demosisto) jụrụ, sị: "you nwere ike itinye ntụzịaka ahụ na ịntanetị, yabụ anyị nwere ike ijide n'aka na enweghị filming filing?"
Onye omebe iwu Democratic Party James ka Kun Sun kwuru na onweghị afọ ojuju ka enwere ike iji ndekọ dị ka esi ele ihe anya n'ụlọ ikpe, ọ chere na ọ ga-abụ ikpe na-ezighị ezi iwere ikpe site na naanị otu echiche mgbe mmadụ abụọ na-etinye aka. Mgbe ọ na-ekwupụta nchegbu ndị a dị n'elu, Mr. Lee mesiri obi ike na enwere ụkpụrụ nduzi maka ojiji nke igwefoto, o kwuru na iji ya nwere iwu megidere ya.
Nzuzo 5338 1 Echiche Taa